Kenya oo argagax ka muujisay qorshaha Donald Trump ee taageeradda AMISOM.
Iyadoo ay Gacan-yarayaasha Madaxweynaha la-doortay ee Maraykanka, Donald Trump su’aal ka keeneen Dagaalka 10-sanno jirsaday ee ay Maraykanka kula jiraan Xarakadda Alshabaab ayaa waxa qeylo-dhaan walaac xooggan leh ka muujiyey Afhayeenka Dowladda Kenya, Eric Kiraithe, kaasi oo sheegay inay arrintaasi walaac xooggan ku abuurayso Kenya.
Isagoo la hadlayey Wargeyska the Standard ee ka soo baxa magaalladda Nairobi ayuu tilmaamay in walaaca ku xeeran Tallaabadda uu Maamulka Donald Trump ka qaadan doono Dagaalka socda ee ka dhanka ah Xarakadda Alshabaab ee Somalia.
Waxa uu intaasi ku daray inay Maraykanka taageero muhiim u yihiin Hawlgalka ay Ciiddanka AMISOM kula jiraan Al-shabaab, kaasi oo soo bilowday sannadkii 2007-dii.
Afhayeenka Dowladda Kenya, Eric Kiraithe oo isagu ah xubin Sare oo ka tirsan Ammaanka waxa kalo oo uu sheegay inay Dowladda Kenya qeyb ka tahay Dagaalka lagula jiro Alshabaab, kana mahad celinayso Taageeradda ay Maraykanka siiyaan Kenya iyo dalalka kale ee qeybta ka ah Hawlgalka Ammaanka ee Gobalka.
Dhinaca kale, Gacan-yarayaasha Madaxweynaha Maraykanka ugu qaabilsan Xilliga Xil-wareejinta ayaa su’aalo badan iska weydiiyey waxa loogu guuleysan la’ yahay Dagaalka ay Maraykanka kula jiraan Xarakadda Alshabaab oo 10-sanno jirsatay.
Baaritaanka ay isweydiiyeen Kooxda la shaqeysa Donald Trump ayaa ku soo beegantay sannad-guuradii Koowaad ee ka soo wareegtay markii ay Dagaalamayaaasha Alshabaab in ka badan 100 Askar Kenyan ah ku dileen xero ay Ciiddankaasi ku lahaayeen Deegaanka Ceel-cadde ee Gobalka Gedo bishii Janaayo 15-dii ee sannadkii la soo dhaafay.
Si kastaba ha ahaatee, Qeylo-dhaanta ka timid Dowladda Kenya oo ay Ciiddan ka joogaan Somalia ayaa ku soo beegantay 2 bilood kadib, markii ay Dowladda Maraykanka sheegtay inay Kenya siinayaan 6 Diyaaradaha Helikopters-ka, si ay ugu adeegsadaan Hawlgalka ay kula jiraan Dagaalamayaasha Alshabaab.